Amabhaso obuNkokheli beGlobal Global Geospatial abhengeziwe, aza kusiwa kwi-GWF-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Iigxina ze-2019 Geospatial World Leadership ziye zaziswa kwaye ziya kuhanjiswa kwi-GWF
26 Matshi we2019: Iindaba zeMedia kunye noNxibelelwano ubhengeze abaphumeleleyo Ibhaso leNgcaciso yeHlabathi yeGeospatial 2019, ezenza ukuba zivulele iinkokheli ze-geospatial shishini eziye zazisa ezintsha kwimimandla yazo kwaye zathintela kakhulu iimarike ezikhoyo. Abakhethiweyo bakhethwe yi-jury ephezulu ebanjwe nguGreg Scott, uMcebisi weZizwe eziManyeneyo kwi-Global Geospatial Information Management.
Los Ibhaso leNgcaciso yeHlabathi yeGeospatial 2019 Ngo-Apreli i-2 iya kuhanjiswa ngexesha le-Gala Dinner KwiHlabathi yeGeospatial Forum, kwiTaets Art kunye neMidlalo yePaki, eAmsterdam - eZaandam, eNetherlands.
Nazi iindidi zamabhaso kunye nohlu lwabaphumeleleyo:
IBhaso lokuFezekisa uBomi bonke-U-Gqirha Khalifa Al Romaithi
ULt Gen (Retd) uGqr. Khalifa Al Romaithi ube negalelo ekuqhubeleni phambili umsebenzi we-geospatial kuMbindi Mpuma kwaye uthathwa njenge “UYise weNdawo yaseGeospatial” kwi-United Arab Emirates nakummandla. Emva kokuba esebenze njengentloko yoPhando loMkhosi, ubunkokeli bakhe obuququzelela ukusekwa kwe-NSDI kwi-UAE; ngenxa yempembelelo yakhe kunye nenkxaso yamaphulo afanayo kulo mmandla ukususela ngo-2004. Ukuqaphela ixabiso elikhulayo kunye nemfuno yolwazi lwe-geospatial kulawulo nophuhliso, uGqr. Khalifa walwela ukufumaneka kwedatha ye-geospatial ngokusebenzisa imibutho yoluntu efana ne-Bayanat LLC. I-United Arab Emirates Space Agency nayo yasekwa phantsi kobunkokeli bakhe, eyanika amandla kwintsimi yeziseko ezingundoqo kunye nemigaqo-nkqubo kummandla. Ngelixa eqhuba umsebenzi wakhe wokwakha iziko, uGqr. Khalifa uye wanikezela ngobunkokeli njengoMongameli weZiko lokuQinisekisa iNdawo, umbutho ojongene nokuphuhlisa izicelo zendawo zophuhliso nokhuseleko.
Ummeli weGeospatial weNyaka-uKeith Masback
UKeith Masback, owayengumkhosi waseMelika Uu., Ingaba a phambili igunya yamazwe ngamazwe nobukrelekrele geospatial yaye de muva uMlawuli weSigqeba Geospatial Intelligence Foundation yaseUnited States. Ukutyhubela iminyaka, USGIF kwakhokelela ukusuka ngaphambili kwi umnqophiso wayo ukukhuthaza urhwebo lwe geointeligencia ukuphuhlisa intsebenziswano ngakumbi phakathi kukarhulumente GEOINT uluntu, ushishino, izifundiswa, imibutho yezifundiswa kunye nabemi. Masback kuye Isigidimi lokwenyaniso technology geospatial njengoko babesebenza ukubandakanya kwisizukulwana esilandelayo ngeenkqubo ezahlukeneyo yaye swi ukwakha isiseko esiqinileyo ukuze imfundo geospatial kwiiyunivesithi yaseMelika.
Inkokeli yoShishino lwe-Geospatial yoNyaka - uJeff Glueck
UJeff Glueck uye waba negalelo ekutshintsheni kweeNqabana ezikhathini zamva nje. Ngaphantsi kobunkokheli bakhe, ii-Foursquare zityhila umfanekiso walo wesicelo esithehliweyo somthengi ukuba ibe enye yeenkampani ezikhokelayo kwindawo yengqiqo, enceda iimpawu zokufumana, ukuthumela imiyalezo kunye nokulinganisa abathengi. I-teknoloji ye-Foursquare inikeza idatha yendawo ye-Apple, u-Uber, i-Twitter, iMicrosoft, iSamsen kunye nabanye abathuthukisi be-150,000.
Itekhnoloji yoNyaka-uGqr. James Crawford
Ingcaphephe kwiinkqubo intelligence nesithuba yokufakelwa, lukaGqirha James Crawford wasebenzisa amava yakhe ende esebenza NASA ukuba akhokele iziseko Orbital Insight e 2013 xa kushishino isithuba uyiqwalasela umhlaba isesendleleni Sisencotsheni elitsha xesha. Waye uvulindlela sisebenzise amandla basemoyeni ukudala inkqubo entsha ulwazi lwendawo ukuqonda kwaye abonakalisa Earth ukuqwalaselwa loqoqosho kwi iinjongo wonke, yengingqi kunye hyperlocal.
I-Geospatial Woman Champion yoNyaka - Ingrid Vanden Berghe
Ingrid Vanden Berghe onguvulindlela ekuphumezeni GIS eBelgium. Berghe iye yakhokelela ukuphunyezwa komthetho EU nakwizifundo lwefuthe kokusingqongileyo. Ngalo lonke ixesha esasebenza ngokwezikhundla ezahlukeneyo, ngokufuthi kwezinye kwizikhundla ezingundoqo endle geospatial ukuba urhulumente eBelgium, Ingrid ebesoloko ummeli ngokungakhathali iteknoloji ekuphuculeni impilo yoluntu kweli lizwe kunye nommandla Flanders
Ukwenza uMgaqo-nkqubo woLuntu kunye nezixhobo-iZiko loLwazi lwe-Geospatial yase-Ethiopia
Icandelo le-geospatial yase-Ethiopia liya ngokuhamba kunye namaxesha; Elikhokele eli nyathelo liZiko lase-Ethiopia loLwazi ngezeNkcubeko. Njengomphumo wohlengahlengiso lolwakhiwo, umbutho wenziwa ngo-Okthobha u-2018 ngokunikezelwa kunye nemisebenzi eyanikezelwa kuzo zombini i-Arhente yoLwazi lweGeospatial kunye ne-Arhente yoKhuseleko yeNethiwekhi yoLwazi, ukuxhasa ukukhula kwelizwe kunye ne-ajenda yenguqu ngokunikezela Ulwazi olusemgangathweni lomhlaba kubathathi-nxaxheba Ngegunya lokuphumeza uMgaqo-nkqubo weSizwe kuLwazi ngeNdawo neTekhnoloji, iziko sele liqokelele laza laqhuba idatha yeefoto ze-Photogrammetric kwii-GSD ezinkulu ezibandakanya i-43% yomhlaba we-Ethiopia kwaye zavelisa iimephu zomhlaba, i-cadastral ye-thematic kunye enkulu Ukongeza kumbono wakhe wokusebenzisana namaqabane aphesheya ukwenza amandla abo obuchwephesha, ukumiliselwa kwakhe kutshintshiselwano ngeenkcukacha zomhlaba geoportal ngenkonzo iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki ukwenza idatha yelizwe ivule kwaye ngokukhethekileyo simahla.
IZiko loPhando lweGeospatial lonyaka-iRoyal Melbourne Institute of Technology
I-Royal Melbourne Institute of Technology iye yaxhasa ukuqhubela phambili kweengcali ze-geospatial ngokuhlanganisa isihloko kwiikoleji ezininzi. Umxube wayo oyingqayizivele wenkqubo ye-geospatial kunye nemathematika, kunye nombono osebenzayo kunye neendlela ezintsha ezenza umdla wabafundi ngamnye unyaka ngamnye, uncedise ukuvelisa abaqeqeshi abalungiselelwe ishishini. Ukongezelela, inkolelo yenkokeli yokuba ukuhlukahluka kweyona nto ingundoqo yekhwalithi yimizekelo kwaye ibonakaliswe kuphando layo kunye nobuchule obuphezulu.
Ukuqala konyaka woNyaka - IMGeospatial
I-IMGeospatial isebenzisa inzululwazi yengqondo kunye nolwazi olukude kunye nolwazi olusekelwe kwendawo ngendlela ekhethekileyo yokukhupha ingqiqo enobungcali kumashishini. Kwiminyaka embalwa yobomi bayo, inkampani sele isele isebenze kwaye ibonelela izisombululo kwi-arhente eziqaphelekileyo njengeBhanki yehlabathi, i-European Space Agency, i-Affinity Water kunye ne-United Kingdom Space Agency. Njengekuqala kokuqalisa ngaphandle kokutyalomali kwi-VC, i-IMGeospatial iguqulela kwinani elikhulu lamashishini anika izicwangciso ezilula kodwa ezinempumelelo ezinciphisa iindleko kunye nobude beprojekthi.
Ngokuphathelele kwiHlabathi yeGeospatial Forum: I-Forum ye-Geospatial Forum iya kwenzeka kwi-2 ukuya kwi-4 ngo-Ephreli e-Amsterdam. Isiganeko siqonga esisebenzisanayo nesisebenzisanayo, esibonisa umboniso ohlangeneyo kunye owabelwana ngawo welizwe jikelele. Yintlanganiso yonyaka yeengcali ze-geospatial kunye neenkokheli ezimele yonke i-geospatial ecosystem. Iquka imigaqo-karhulumente, i-arhente yelizwe, iinkampani zecandelo labucala, iinkampani ezininzi kunye nophuhliso, amaziko ezenzululwazi kunye nezifundo, ngaphezu kwazo zonke, abasebenzisi bokugqibela bekarhulumente, amashishini kunye neenkonzo kubemi.
Malunga neminye imibuzo onxibelelana nayo: Anusuya Datta, uMhleli oPhetheyo, iMithombo yeendaba kunye noBudlelwane boLuntu, iGeospatial Media kunye noNxibelelwano Anusuya@geospatialmedia.net Qhakamshelana no: +91 9999108798
#GeospatialByDefault-iForam yeGeospatial 2019
IGeobide, unxibelelwano nedatha ye-OGC